Chikafu changu chePeruvia - Chikafu changu chePeruvia
Chikafu changu chePeruvia
Peru inyika ye South America inosanganisira chikamu chikuru chesango reAmazon uye rine rimwe remaguta ekare eInca pakakwirira Andes. Pamusoro pezvo, ndiye muridzi weMupata Unoyera, Inca Trail kubva kuzviuru zvemakore apfuura, mabasa emaoko ane mukurumbira uye hupfumi hwemakoloni uye nzvimbo huru yekuchera matongo mukondinendi iyo inoita kuti tsika yavo, tsika uye nhoroondo yakakosha zvizivikanwe.
Saizvozvo, nharaunda iyi ndiye mugadziri uye akafanotangira imwe yeiyi zvokudya zvakanakisisa munyika, idzo dzinotaura uye dzinoenderana nekunaka kwavo kwakasiyana uye masitaera ayo hunhu hwenyika yavo, rudo uye kuzvipira kwevaturikiri vavo uye zviuru zvemikana yekunakidzwa nekugara Peru nekunhuwa kwese nekuruma.
Iyi gastronomy ndiyo seti ye ndiro dzakakosha uye zvinwiwa Peru izvo zviri chikamu chehupenyu hwakajairika uye tsika dzevagari varo, mhedzisiro yekusanganiswa kwetsika yekubika yeguta rekare neEuropean gastronomy uye zvimwe masangano izvo zvishoma nezvishoma zvakabatanidzwa kwariri.
Recipe yehuku yehuku nembatatisi uye madomasi matsvuku
Huku ndechimwe chezvinhu zvakakosha zvezvizhinji zvendiro dzePeruvian gastronomy, iyo ...
Nguruve Adobo Recipe
Unogona here kufungidzira chikafu chakapfuma, chakatsetseka uye chine muto? Kana zvakadaro, iyo Pork Adobo ichava sarudzo yako yakanaka. Kana ku...
Iyo Sillao Chicken ndiyo inomiririra yakakura kwazvo yemupiro weChinese yekumabvazuva cuisine kubhuku rekubika uye ...
Soup kusvika kuminiti
Soup a la minuta muto usingadhure, wakareruka uye unokurumidza kugadzirira kumba, une resipi ...
Chicken Escabeche ndiro yakajairika yePeruvian gastronomy, iyo yakasvika kumahombekombe ayo kuburikidza ...
Nhoroondo yeyakakurumbira dzvuku noodle dish inoratidzwa pakati pemakore 1840 na1880 apo yakawanda ...
kushamisika kwemangwanani evana
Chero chiitiko mukana wakanaka wekupa kushamisika kwemangwanani, uye zvakanyanya kana ichi chikafu chinonaka chinotungamirwa ...
Carapulca ine muto wakaoma
Carapulca ine soup yakaoma ndiro yePeruvia iyo, maererano nezvinyorwa zvevanyori vakawanda vegastronomic uye vatsvakurudzi, ...
Iyo Patarashca yemusango idhishi rine mabviro anonzi maaborigines uye vagari vePeru vasati ...
Mabviro echokwadi eceviche haambofa akazivikanwa, sezvo iri ndiro inopokana seyayo nenyika dzinoverengeka ...
Panguva imwecheteyo, rudzi urwu rwekudya ndeimwe yezviyo Chinonyanya kukosha munyika uye muenzaniso weizvi fusion cuisine nekuda kwenhoroondo yayo yakareba yetsika dzakasiyana-siyana, iyo yakavakirwa pamusanganiswa weruzivo rwekutanga rwePeru yekare neSpanish cuisine mukusiyana kwayo kwakasimba, kuvepo kweAndalusian uye mupiro wegungwa reAtlantic rezasi kweSahara Africa yevaranda pakawanikwa nzvimbo yakaitika.
Munyika, chikafu chepakutanga chePeru ndicho chakasiyana zvakanyanya, uko, nekuda kwebhuku "57 vakagadzirira kunzwisisa kuti isu vePeruvia tiri sei ” vanoverengerwa kusvika 491 ndiro dzemazuva ose. Pamhenderekedzo yePeruvia kune 2500 marudzi akasiyana emasupu, pamwe chete nezvinodarika mazana maviri nemakumi mashanu zvechinyakare zvekuseredzera nezvinwiwa zvechisikigo makumi manomwe pamwe nekugadzirira doro. Asi, iwe unozoshamisika kuti nei aya akawanda emidziyo aripo? Uye mhinduro ndeyekutenda kune peculiar geography yenyika kubva paruoko kuenda kuruoko tsika musanganiswa uye kugadziriswa kwemamwe eruditions ekare kune yemazuva ano cuisine.
Ndiro imwe neimwe ine delicate flavour, zvimwe zvakabatana nechikamu chavakasikwa, sekuravira kwe Mar, munyu wemahombekombe uye kunyange ruvara rwakanyanya uye kunhuwa kwezvinhu zvose zvinoputirwa nezuva rinopenya. Panyaya ye makomo, zvinotonhora uye zvishoma zvakanyanya zvinonaka zvinofadza zvinoperekedzwa nemaruva, mashizha uye zvimwe zvikamu zvinomutsidzira kutsva uye runyararo rwezvisikwa. Uye pane kudaro, mune yake nzvimbo yepakati, inova iyo yakakomberedzwa nezvivakwa, mafambiro etsika uye nzvimbo yakawedzera ecliptic, chikafu chine futuristic uye incredible mhepo inopenya mumagadzirirwo, kupokana uye kunyangwe kuoma kwezvimiro uye mavara.
Nekudaro, zvese izvi hazvisi kure nekukwanisa kuravira, sezvo vezvenhau vekunze vanopa mukana ziva uye udye ndiro dzechivanhu uye yekuda kwenyika mukati nekunze kwePeru yemapazi akasiyana kana maresitorendi epasirese, izvo zvinobvumira vagari venzvimbo, vashanyi nevatorwa, kuravidza, kuziva uye kurangarira kunaka kunoshamisa kwenyika ino huru.
Nenzira imwecheteyo, mapeji ane ruzivo, midhiya uye masocial network, pamwe chete neaudiovisual zvinhu zviri pamanetiweki uye veruzhinji mabhanari edhijitari anogara aripo achiratidza gadziriro uye yambiro kuti zvese zvinogona kugadzirwa zvichave chikonzero chakakosha chekudzoka zvakare uye kuenderera mberi nekugadzira.
Muchirevo chechinyorwa ichi uye kuti iwe uwane nzira yekuyemura, kugadzirira uye kugovera izvi ndiro, zvinwiwa, madhiri, soups, yakaoma. Zvinwiwa uye zvinwiwa, myperuvianfood inokupa yakakura recipe list, kugadzirira uye zviratidzo kuitira kuti iwe ugone kuravira kunaka uye kunaka uko zvinonaka zve Peru tora iwe.
Ichi ndicho peji peji specialized in the show of wide and certified material of different mapoka, ese akaumbwa nemazvo zvekuti haufanire kuve mubiki mukuru kuti usvike padanho rekuurayiwa kwevabiki vane mukurumbira. Peru. Nekudaro, ongorora zvakadzama mukunyora uku uye uwane sarudzo uye mabhenefiti ayo nawo myperuvianfood uchasvika
Sezvakadzidziswa kare, myperuvianfood inounzwa se online interface kuzadzwa ne gadziriro dzakawanda yezviratidzo, zvechinyakare uye zvine mukurumbira ndiro dzePeru; pamwe neiyo eccentric, ushingi, yekare, yemazuva ano uye kunyange yemazuva ano chikafu chatakapihwa neguta rose uye izvo zvakawanda zvakashanduka kuti zvitinyengerere uye kutishamisa panguva ino.
Peji ino ine injini yekutsvaga ine hombe content catalog. Muchiitiko ichi, ichaonekwa kugadzirira, mabikirwo, nhanho nhanho mirairo, pamwe chete nenhoroondo pfupi yezvakaitika kare uye mamwe mashoko ekuda kuziva ezvokudya zvakasiyana-siyana zvinogoverwa maererano nenzvimbo yekugadzirira uye tsika.
Nenzira inotevera, the peji zvemukati nekugovaniswa kwayo.
Mukuwedzera, inopa injini yekutsvaga yega kwaunogona kupinda kuti utsvage mitsetse yakasiyana muzvikamu zvekicheni zvinotevera:
Iyi ndiyo yazvino kicheni maitiro mukati Peru sezvo zvichitora mabikirwo kubva ku prehispanic yapfuura kuzvigadzira patsva, kununura uye kukoshesa zviwanikwa zvemunyika. Hezvino zvinouya zvekudya zvekuzvarwa zvakaita se tarwi, chuño, quinoa, kiwicha, moraya, cochayuyo, maca, coca uye hanzi.
Mumhando iyi yekubika, injini yekutsvaga inokanda ndiro dzese uko rice iva mufambidzani kana chokwadi, uve chinhu chikuru. Thanks kune Cantonese Chinese Immigration, maflavour anobva kuAsia akabatanidzwa uye akakonzera mamwe mabikirwo anoratidzwa mukati me peji peji zvachose kubva kuPeru asi nemidzi uye kupindira kubva kune dzimwe nyika pamwero muduku.
Pfuma ye hove muFauna yePeru, ihombe, saka cuisine yakajairana nehupfumi uhwu. Pakati pemhando iyi pane chupe marudzi, akadai seceviche, chalaca-style mussels, tiradios uye seco.
Chikafu cheCreole chine nguva yacho yekutanga XIX remakore uye imhando yakasiyana-siyana kumaguta emahombekombe panguva yeViceroyalty yePeru. Pano kunoratidzwa zvokudya zvose pakati pezana remakore XNUMX uye XNUMX pamwe chete nehunyanzvi, nhoroondo uye midziyo yakakosha.
Muchikamu ichi chepamusoro chenyika, se ndiye Andes, kudya kunobva pa mbatatisi, chibage nemiriwo takabatana nekuunzwa kwemupunga, chingwa nepasita uye nyama dzakaita selama, alpaca nemhuka dzesango. Kubva pane izvi zvinongedzo ndezvekuti mabikirwo ayo peji inokanda kune mutengi anogadzirwa
chikafu chese ne kupfeka, sosi uye zvinwiwa Inopindirana nemidziyo yesango, iyo inofambidzana nemiriwo yakaoma uye yakabikwa yakabikwa kana isina kunyatsojeka.
Mune iyi sarudzo isa zvakasiyana cocktails uye zvinwiwa zvinodhaka. Pamwe chete negadziriro dzose dzinosanganisira dzakaoma newaini kana zvimwe zvigadzirwa zvakaviriswa.
Mukati mepeji unogona kutsvaga mabikirwo ako zvichienderana ne main ingredient kushandisa, iyo icharatidza zvese mafomula anowanikwa yechigadzirwa chenyeredzi ichi.
Avo zvakanyanya kudiwa zvinongedzo uye zvinoshandiswa zvinounzwa munguva pfupi, saka une zano rekuti chii chekutsvaga, chakachinjirwa kune chinowanzo shandiswa kuPeruvia kugadzirira.
Hove, shellfish uye crustaceans
guinea pig kana guinea pigs
Zvokudya zvese zvinobva kuPeru ndezve zvakakosha chete kunharaunda yemuno neyepasirese, kungave nekuda kwenhoroondo yayo, zviratidzo kana nekuda kwekunaka kwayo kwakasiyana uye kusingaenzaniswi.
Zvisinei, kune dzimwe ndiro dzinomira kunze nekunyanya kusimba kwekuve nhaka netsika dzeguta. Zvimwe zvacho zvinowanikwa zvakanyudzwa mukati myperuvianfood uye vanorondedzerwa neshiviriro uye kubata nguva; mazita avo ndeaya:
animated huku mupunga
Purple uye quinoa porridge
chibage chepepuru chicha
Ndeapi mabikirwo einjini yekutsvaga?
myperuvianfood rine bhuku remaresiphi rine zvinopfuura 100 mafomula kugoverwa zvichienderana nerudzi rwendiro kana chinwiwa chinotumirwa. Izvi nechinangwa chekuzivisa chishamiso chePeruvia cuisine, kunaka kwayo, kuravira, kuenderana, kunhuhwirira uye magadzirirwo, izvo zvinopa vagari venzvimbo nevashanyi mukana wekuti. ongorora nhoroondo yayo uye tsika mune imwe mharidzo.
Saizvozvo, iyi webhusaiti ine chinangwa chekubvumira muongorori wega wega gadzira ndiro dzakasiyana-siyana mukunyaradza kwese kwaunenge uri, ine zviri nyore uye zvinonaka zvinonaka uye muhuwandu hwaunoda, saka hazvifanirwe kuenda kuresitorendi uye kanzura mitengo yakakwira nokuda kwezvokudya zvokufananidzira uye zvinozvininipisa izvo guta rePeru rinopa.
Nenzira imwecheteyo, isvikiro rinokanda vashanyi varo vese. super nyore mabikirwo izvo zvisina unofanirwa kunge uri mubiki ane ruzivo zvakanyanya kuti uvabudise. Chinhu chimwe chete chinodiwa chinotanga nekududzira kwakanaka uye kuisa pfungwa pakubika, zvese zvinongedzo uye maitiro akanaka paunotanga.
Kana paine chishuwo chekumisa chero kuonana nepuratifomu, myperuvianfood ane nzira dziri nyore uye dzakasununguka dzekubatana kuitira kuti iwe uratidze kusava nechokwadi kwako, matambudziko kana zvishuwo kune vatariri nemaneja ewebhu, iyo mune imwe nguva yenguva ichapindura kune yako chikumbiro kana kodzero kuitira kuti kugara kwako nezvido zvigadziriswe.
Iyi svikiro inoratidzwa se fomu iyo yakagadzirwa sezvinotevera:
zita: Iyi data inofanirwa kukupa iwe a Zita kumuridzi wechikumbiro, sezvazvinenge zviri izvo zvinosungirwa kuti utaure kune munhu kana achinge apindura kana kudaidzira kutariswa.
Mail zvemagetsi: Varidzi vepeji vachatumira mhinduro kune email yako, ndosaka iyi kero yakakosha
Nyaya: Iyi ndiyo nzvimbo yauchapihwa a musoro kana nharo kumharidzo. Iine nzvimbo shoma saka tsananguro inofanira kuva pfupi uye nemazvo
Mensaje: Munzvimbo ino unogona tell chero kukanganisa kana kuda kwaunoda kupindira. ane a Nzvimbo huru kwaunogona kutaura nenyaradzo uye nerusununguko zvese zvinotishungurudza. Asi zvakadaro, inokurudzirwa kuve yakananga uye yakadzama mudambudziko kana mubvunzo
Iwo akanakisa ePeruvia chikafu chekubika